ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သေးငယ်။ အလင်း၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရည်ရွယ်၍ လောသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်လား။ | Linux မှ
el en Linux ကမ္ဘာ ကွဲပြားသောအမြင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျန်းမာသောအငြင်းပွားစရာများဖြစ်လေ့ရှိသည်၊ Desktop Environment (DE), အကောင်းဆုံး Window Manager (WM), အကောင်းဆုံး Startup Manager (DM)အကောင်းဆုံး Kernel အမျိုးအစား (သို့) ဗားရှင်းနှင့်၎င်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် GNU / Linux Distroအခြားများစွာသောသူတို့အလယ်တွင်လော။
သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီအငြင်းပွားဖွယ်ရာaရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ အဓိပ္ပါယ်သို့မဟုတ်တစ်လောကလုံးအဖြေကိုအနည်းဆုံးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခု အလယ်အလတ်သဘောတူညီမှုတုံ့ပြန်မှုသုံးစွဲသူအုပ်စုတိုင်းသည်အမြင်အာရုံ၊ လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားတို့မှသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုကိုခံစားနိုင်မှာသေချာသည် DE, WM, DM, Kernel သို့မဟုတ် Distro GNU / Linux။ ဒါကြောင့်ဒီ post မှာဒီအချက်ကိုနည်းနည်းလေ့လာမယ်၊ ဖြူ.
၂၀၂၀ ၏ GNU / Linux Distros များအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ပရိုဂရမ်များ
မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသောအခြားအငြင်းပွားဖွယ်ရာများ Linux ကမ္ဘာ သူတို့ဖြစ်နိုင်တယ် ဘယ်အမျိုးအစားအမျိုးအစားကအကောင်းဆုံးလဲ။ အထူးသဖြင့်၏ ရုံးအလိုအလျောက်၊ အင်တာနက်ဘရောင်ဇာများသို့မဟုတ်ဂိမ်းများ။ ဤအကြောင်းအရာများသည်များသောအားဖြင့်သင့်အတွက်စိတ် ၀ င်စားပါက၊ ဤစာစောင်ပြီးဆုံးပြီးနောက်အောက်ပါတို့ကိုဖတ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည် ယခင်ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ:
၂၀၂၀ အတွက် MS Office အတွက်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်
FPS - Linux အတွက်အကောင်းဆုံးလူသုံးသေနတ်သမားများ
1.1 ဘယ်လိုအများစု GNU / Linux Distros ကိုကြိုက်?
1.2 ကွဲပြားတဲ့ GNU / Linux Distros အနည်းငယ်ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဘယ်လိုအများစု GNU / Linux Distros ကိုကြိုက်?
သုံးပြီးငါ့အနှစ် 10 ကျော်၌တည်၏ GNU / Linux များနှင့်ရုံမသာ ပုံမှန်အသုံးပြုသူ (ရုံးအလိုအလျောက်) ဒါပေမယ့်အဖြစ် အဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူ (နည်းပညာပိုင်း) ငါအများစုပြောနိုင်ပါတယ် Linux သုံးစွဲသူများ မည်သူသည် GNU / Linux ကိုအသုံးပြုမည်နည်း သာ။ ကြီးမြတ်ယေဘုယျကွန်ပျူတာအသိပညာ"X or Y" အခြေအနေအရ GNU / Linux ကိုအသုံးပြုသောအခြေအနေတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သူများ
ထို့ကြောင့်သူအရှိဆုံးယုံကြည်သည် Linux သုံးစွဲသူများ အားလုံးနီးပါး၏လက်ရှိစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမော်ဒယ်နှင့်အတူတိုက်ဆိုင် GNU / Linux Distros, တဆင့်ကမ်းလှမ်းဖြန့်ဝေ 1 မှ2GB အကြားအသေးစား ISOs, သေးငယ်တဲ့ USB drives တွေကိုအပေါ်လျင်မြန်စွာ download လုပ်ပါနှင့်အသုံးပြုသည်။ ရိုးရှင်းသော၊ ရိုးရှင်းသောနှင့်ရိုးရှင်းသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းဆိုလိုသည်မှာယေဘူယျအားဖြင့်သာမန်လူတစ် ဦး ၏ကွန်ပျူတာ၊ အိမ်၊ ကျောင်းသို့မဟုတ်ရုံးနှစ်ခုလုံးတွင်သာမန်လူတစ် ဦး သုံးနိုင်သည့်စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေခံအကျဆုံးသုံးစွဲသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဒါကသူတို့ကိုကမ်းလှမ်းရန်အတွက်သူတို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချသည် ပိုမိုမြင့်မား ကွန်ပျူတာဗဟုသုတအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ operating system အခြေစိုက်စခန်း သင့်ရဲ့အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုမှပုံသွင်းရန်။
သို့သော်ကံကောင်းထောက်မစွာလည်းရှိပါသည် အထူး GNU / Linux Distros တိကျသောအသုံးပြုသူများကိုသူတို့စိတ်အားထက်သန်သည့်အရာအားလုံးကိုအနည်းငယ်ပိုမိုပြီးအဆင်သင့်ဖြစ်စေသောအချို့သောနည်းပညာနယ်ပယ်တွင်၊ Distros အတွက်အကောင်းဆုံး။
developer များ (ပရိုဂရမ်မာများ)၊
privacy နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်။ စိတ်ထက်သန်
SysAdmin သို့မဟုတ် DevOps ပညာရှင်များ၊
ဤအရာအလုံးစုံ, ယေဘုယျအားဖြင့်အထူးပြုဖြစ်သော်လည်း, ဆက်လက်လေ့ရှိပါတယ် သေးငယ်ရိုးရှင်းသောနှင့်အနည်းဆုံးဖြန့်ဝေ။
ကွဲပြားတဲ့ GNU / Linux Distros အနည်းငယ်ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။
မည်သည့် application ကိုမဆိုအသုံးပြုရန်ကန့်သတ်ထားသောကွန်ပျူတာအသိပညာကိုအကန့်အသတ်ရှိသောကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို application များကို install လုပ်ရန်မလိုလား (သို့) install လုပ်လိုသောကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအဘယ်မှာရှိသနည်း။ (သို့မဟုတ်) ကွန်ယက် (အင်တာနက်) နှင့်ချိတ်ဆက်မှုသည်တရားမဝင်၊
GNU / Linux Distros များသည်အလင်းမဟုတ်သော၊ အားကောင်းသော၊ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်းအမြင်အာရုံအရလှပသော၊ မရည်ရွယ်ဘဲအမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များမဟုတ်ဘဲအရွယ်အစားသေးငယ်။ ကြီးမားခြင်းမရှိသော၊ ကြီးမားသောအရွယ်အစားနှင့်သေးငယ်။ သေးငယ်။ သေးငယ်သောသေးငယ်သောအရာများအတွက်မည်သည့် GNU / Linux Distros များတည်ရှိနိုင်သည်။ ဘာမျှမလိုဘဲအင်တာနက်အနည်းငယ်သာရှိခြင်း၊
ဒါက GNU / Linux Distros အရာရာတိုင်းကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေချင်သောကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် application များနှင့်ကိရိယာများ (ပရင်တာများ၊ ဘက်စုံသုံး၊ ဝိုင်ဖိုင်၊ ဘလူးတုသ်သို့မဟုတ်အခြားအရာများ) ကိုတတ်နိုင်သမျှစမ်းသပ်။ အသုံးပြုနိုင်သည်။
ထိုသုံးစွဲသူများတွင်များစွာသောသူတို့သည်များသောအားဖြင့်အသုံးပြုလေ့ရှိသည် Windows ကိုအထူးသဖြင့် အက်ပြတင်းပေါက်များ စီးပွားဖြစ်၊ ပိတ်ထားသောနှင့်စီးပွားဖြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်များအပြည့်အက်အက်၊ အသုံးဝင်သည်ဖြစ်စေမလုံခြုံ၊ မလိုအပ်၊ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ၊ Linux လောက။ ဤအရာအားလုံးသည်မကြာခဏဖြစ်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် Windows ကွန်ပျူတာသင်သည်ဤအရာအားလုံးကိုအင်တာနက်မလိုအပ်ဘဲအလျင်အမြန်တပ်ဆင်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် DVD နှင့်ထို့ထက်ပိုသော application များစွာသို့မဟုတ်ရာပေါင်းများစွာရှိသော Windows ကိုသုံးနိုင်သည်။
သေချာပါတယ်၊ GNU / Linux Distros como Debian နှင့် Ubuntu တို့ဖြစ်သည်၊ သင့်တွင်အင်တာနက်မရှိပါကသို့မဟုတ်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိပါက၊ တပ်ဆင်ရန်၊ ပြုပြင်ရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသော package များနှင့်ပြည့်နေသောဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သော DVD များကိုကမ်းလှမ်းပါ။ Mint, Deepin, Elementary နှင့် Zorin များစွာသောအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်သော၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသော interface များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအမျိုးမျိုးသော application များကိုပေးသည်။
နှင့်အခြားသူများကြိုက်တယ် အဆုံးမဲ့ OS သူတို့ကပိုကြီးပြီးပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ ISO ပြည့်စုံသောအက်ပလီကေးရှင်းများဖြင့်တပ်ဆင်ရန်နှင့်အော့ဖ်လိုင်းအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ စဉ်တွင်, MX Linux အလွန်ကောင်းပါတယ် Distro တိုက်ရိုက် install လုပ်ခြင်းမပြုမီကမ်းလှမ်းထားသောအရာအားလုံးကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအဖြစ် ဒီ post အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှု, က၏ developer များမူဝါဒအအဖြစ်အချိန်ကြောင်းကိုဖန်တီးခဲ့တယ် မိခင်သို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာ distrosDistros အမြောက်အမြားတွင်ပြန့်ကျဲနေသောဤအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးကိုအတူတကွစုဆောင်းခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်ရရှိအောင်ပြုလုပ်ခြင်း ရှိပြီးသားရိုးရာ ISO (သေးငယ်ပေါ့ပါးရိုးရှင်းပြီးရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်း) လာမည့်:
"Live စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်သည့် Live GB4GB အထိတပ်ဆင်ထားပြီး Live တပ်ဆင်ပြီးပါကသုံးစွဲသူအားအကောင်းဆုံးသောဘက်ပေါင်းစုံအသုံးချဆော့ဝဲများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောယာဉ်မောင်းများနှင့်အထွေထွေစာကြည့်တိုက်များအနက်အများဆုံးထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးပြီးဖြစ်သည်။ ပြင်ပ".
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုတစ်အကောင်းဆုံးများအတွက်ပေါင်းစည်းဖြစ်နိုင်သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု၊ အပလီကေးရှင်းများနှင့် parameters များကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အကောင်းမွန်ဆုံးပြုလုပ်ခြင်းကိုလျှော့ချသည် အတွေ့အကြုံနည်းသော GNU / Linux အသုံးပြုသူများနှင့်ပညာရှင်များထို့ကြောင့်ရေတိုတွင်ရလဒ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အလားအလာကိုလျော့နည်းစေသည် Distros ကိုမကြာခဏပြောင်းပါ (သို့) Windows သို့ပြန်သွားပါ.
ငါ့အမှု၌ငါသုံးပါ MX Linuxငါ့ကိုခွင့်ပြုမသာကတည်းက "တိုက်ရိုက်" အရာအားလုံးကိုကြိုးစားသုံးပါ သို့သော်တပ်ဆင်ပြီး၊ ပြုပြင်ပြီးသော၊ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ဖန်တီးနိုင်သည် ကျွန်ုပ်၏အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်အရတပ်ဆင်နိုင်သည် ISO Liveတိကျစွာဖြေရှင်း အင်တာနက်လိုအပ်နေတဲ့ပြနာ ငါဆန္ဒရှိသမျှအရာအားလုံးရှိသည်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ရှိခြင်း၏ပြtheနာကိုပြန်သွားဖို့ နာရီပေါင်းများစွာတပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်း ငါခြစ်ရာကနေစတင်ရန်ရှိသည်အခါတိုင်း။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Distros GNU/Linux» သူကဘယ်လိုသူတို့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခြားရွေးချယ်စရာပူဇော်သင့်သလဲ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ သေးငယ်။ အလင်း၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရည်ရွယ်၍ လောသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်လား။
ဆောင်းပါးတစ်ခုသည် MX Linux မှယူဆောင်လာသည့်ကိရိယာများနှင့်၎င်းတို့ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် isos များသည်ပေါင်းစပ်ထားသည့်ကိရိယာအစုအပေါင်းတစ်ခုလုံးနှင့်ပိုမိုပြည့်စုံကြောင်းလူအများအပြားက Linux ကိုသုံးသောကြောင့်ပိုကောင်းသည်။
မင်္ဂလာပါ, မိုက်ကယ်။ ဒီဆောင်းပါးက MX Linux အကြောင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင် ISO များကိုမည်သို့ဖန်တီးရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ https://blog.desdelinux.net/mx-snapshot-como-crear-respin-personal-instalable-mxlinux/
GNU / Linux ကိုသိချင်တဲ့ Windows လူတွေဘာဖြစ်တာလဲ
Desktop အတွက် GNU / Linux တိုးတက်မှုများပိုများသည်ကိုသင်နားလည်ရမည်။ Windows သည် Ease အဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်။
အရာအားလုံးနီးပါးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသော distro ဖြင့် GNU / Linux ကိုသိရန်ကောင်းသော်လည်း၊
ထိုအခါသူတို့သည်ပိုမိုသောဗဟုသုတနှင့်စင်ကြယ်သော terminal လိုအပ်သော distrosdwante̶̶p̶r̶o̶f̶e̶s̶i̶o̶n̶a̶l̶e̶s̶ဖြစ်ပါက၎င်းတို့ကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။
CMD နှင့် Terminal ကိုအသုံးမပြုသူများသည် graphical interface မရှိသောစင်ကြယ်သော command line distro ကိုအသုံးပြုလိုမည်မဟုတ်ပါ။
Windows နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် GNU / Linux ရဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြည့်ရမယ်။ အရာရာတိုင်းကိုသင်နှစ်သက်သလိုပြုပြင်နိုင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ, A47 ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီစိတ်ကူးကစမ်းသပ်ဖို့အတွက်တိုက်ရိုက်သုံးနိုင်တဲ့ပိုမိုအားကောင်းတဲ့ All-in-one Linux Distros ကိုတောင်းဆိုပါ။ ပြီးတော့ install လုပ်တဲ့အခါမှာ applications အမျိုးမျိုး၊ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ GNU သုံးစွဲသူတွေအကြောင်းစဉ်းစားပါ။ / Linux, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူတွေကအရာအားလုံးကိုစမ်းသပ်ချင်တယ်၊ ဒါတွေအားလုံးကစာကြည့်တိုက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ယာဉ်မောင်းတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ပံ့ပိုးမှုကြောင့်အားလုံးနီးပါးအလုပ်လုပ်တယ်။
Clonezilla Live 2.7.0 သည် Kernel 5.9.1, package update များနှင့်အခြားအရာများပါရှိသည်